Waa Kuma Xidiga Real Madrid Ka Tirsan Ee Jurgen Klopp Doonayo In Dalab 75 Milyan Ah Ay Kooxdiisu Ka Gudbiso? - Gool24.Net
Waa Kuma Xidiga Real Madrid Ka Tirsan Ee Jurgen Klopp Doonayo In Dalab 75 Milyan Ah Ay Kooxdiisu Ka Gudbiso?
Kooxda haysata koobka kooxaha Yurub ee Liverpool ayaan wali si buuxda u galin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxayna haystaan muddo bil ka yar si ay xoojin ugu sameeyaan kooxdii uu Jurgen Klopp ugu soo guulaystay koobka Champions League.
Liverpool ayaa tixgalinaysa in ay dalab 75 milyan yuro ah ka gudbiso xidig ka tirsan kooxda Real Madrid oo aan boos joogto ah ka heli karin shaxda Zidane ee xili ciyaareedka cusub, waana xidig uu Jurgen Klopp in badan jecel yaahy in uu Reds keeno.
Wargayska dalka Spain ka soo baxa ee El Desmarque ayaa shaaciyay in Liverpool ay xiisaynayso saxiixa xidiga kooxda Real Madrid ee Marco Asensio kaas oo ku soo dhibtooday in uu boos joogto ah ka helo Bernabeu.
Ma aha markii ugu horaysay ee Marco Asensio lala xidhiidhinayo kooxaha Premier league balse waxa jiray waqti la filayay in uu qayb ka noqdo heshiiskii ay Real Madrid ku doonaysay xidiga Tottenham ee Christian Eriksen inkasta oo ay Madrid door bidayso Pual Pogba.
Real Madrid ayaa sidoo kale la sheegay in ay Marco Asensio u soo bandhigtay Liverpool si ay Sadio Mane laakiin Liverpool ayaan diyaar u ahayn in Sadio Mane uu kooxdeeda ka baxo.
Marco Asensio ayaa Real Madrid sanadkii 2014 kii kaga soo biiray kooxda Real Mallorca wuxuuna waqti amaah guulaysatay ugu soo qaatay kooxda Espanyol laakiin markii uu Bernabeu ku soo laabtay waxa uu fursad kaydka ah ka helay Zidane.
Markii uu Zidane ka baxay Madrid waxa uu Marco Asensio galay waqtiyo kala duwan oo uu xaalado adag soo maray inkasta oo uu xataa waqti badan oo uu ku ciyaaro ka helay Julen Lopetegui balse Santiago Solari ayaa kaydka ku ilaaway.
Marco Asensio ayaa heshiiskiisa Real Madrid lagu burburin karaa 700 milyan yuro laakiin Real Madrid ayaa diyaar u ah in ay si wayn qiimahan hoos ugu dhigaan si ay lacag fiican uga samayn karaan xidig aan boos ka heli karin shaxda Zidane.
Jurgen Klopp ayaa la ogyahay in uu ka mid yahay taageerayaasha Marco Asensio isla markaana uu hore iskugu dayay in uu xidiga reer Spain la soo wareego.
Si kastaba ha ahaatee, El Desmarque ayaa shaaciyay in Liverpool ay ka fiirsanayso in ay dalab 75 milyan yuro ah u dirto Real Madrid si ay Marco Asensio u keeni karaan Anfield.